Takaitra navelan’i Enawo : Tafakatra 50 ireo namoy ny ainy -
AccueilSongandinaTakaitra navelan’i Enawo : Tafakatra 50 ireo namoy ny ainy
13/03/2017 admintriatra Songandina, Vaovao songadina 0
Tafakatra 50 ireo olona maty tao anatin’ny distrika 58 nahavita ny tatitra mahakasika ny takaitra navelan’ny rivodoza raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny sampandraharaha nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC ny sabotsy lasa teo. Olona 20 ihany koa no mbola tsy hita hatramin’izao taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo ny herinandro lasa teo. Miisa 176 084 ireo tra-boina ankehitriny, ary manodidina ny 183 no naratra. Maherin’ny 110 693 ireo olona voatery nafindra toerana ary 65 331 ireo tsy manan-kialofana sady voatery nafindra toerana ihany koa, nahatratra dimy kosa ireo trano nirodana teto an-drenivohitra nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Enawo izay hatrany. Mavesatra ny salan’isa ary tsy nitsaha-nitombo ireo voina tao anatin’ny andro vitsivitsy nanaovan’ireo teknisianina avy amin’ny BNGRC ny fidinana hifotony, nijerena ireo takaitra rehetra navelan’i Enawo. Tsy mitazam-potsiny ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany fa nametraka ivon-toerana maro entina hanampiana ireo olona an’arivony maro manerana ny nosy niharam-boina. Ivon-toerana 118 ankehitriny no miparitaka manerana ny nosy any amin’ireo faritra rehetra nandalovan’i Enawo. Ireo ivon-toerana izay napetraka hitondra fanampiana, sy hisahana ireo traboina maro, amin’ny alalan’ny famatsiana sakafo sy fampialofana ireo traboina, manodidina ny 45 ireo ivon-toerana ho an’ Analamanga. Ny « Croix rouge » koa moa ankehitriny izay nanetsika ireo mpilatsaka an-tsitrapo maherin’ny 900 hiara-hisalahy hanampy sy hanohana ara-moraly ireo niharam-boina rehetra tamin’ny Enawo.
Vaindohan-draharaha ny sehatry ny fanabeazana…
Anisan’ny namela takaitra ho an’ny sehatry ny fanabeazana ihany koa ny rivodoza. Fotodrafitrasam-pampianarana maro no potikin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo izay, ka voatery nampiato ny fandaharam-pianarana ireo toeram-pampianarana maro tany amin’ny faritra Atsinanana sy Avaratra Atsinanan’ny Nosy. Manoloana ny tranga dia nidina hifotony ny delegasiona notarihin’ny minisitra misahana ny fanabeazam-pirenena nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo, ka ny lalam-pirenena faharoa no nanombohana izany. Toerana maro no nahitam-pahavoazana ka nitondram-bahaolana avy hatrany mba hiverenan’ny fandaharam-pampianarana amin’ny laoniny na dia nisy ary ny voina lehibe navelan’ny rivodoza. Ho an’ny tao Ampasimbe dia niepaka ny tafo ka nivatsy fanitso vaovao sy fitaovan-tsekoly ny minisiteran’ny Fanabeazana. Ho an’ny tao Antsampanana kosa dia efitranom-pampianarana miisa efatra no nahitam-pahasimbana ka nitondrana fitaovana hanorenana. Ankoatra izay, avy hatrany dia nampidirina ho mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra Fram mbola tsy voaray. Mitohy hatrany kosa ny fitsidihana ataon’ny delegasiona avy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, manao laharam-pahamehana ny sehatry ny fanabeazana araka ny baikon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.